musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Zvitsva Zvifambiso Zvekufambisa zveHawaii Vashanyi
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
John de Fries, CEO weHawaii Tourism Authority
Zvipatara muHawaii zvave kuzara, ICU Mabhedhi haatombowanikwi, asi vanopfuura zviuru makumi maviri vashanyi vachiri kusvika mu Aloha Taura zuva nezuva.
Mushure megore rekunyarara, iyo Hawaii Tourism Authority CEO yava kutaura ichikurudzira vashanyi nevagari kuti vagare kumba uye vasafambe.
Izvi zvakanzwikwa naHawaii Gavhuna Ige nhasi.
Gavhuna weHawaii. David Ige nhasi adaidzira vagari veHawaii nevashanyi kuti vanonoke kufamba kwese kusingakoshe-kunopera kupera kwaGumiguru 2021 nekuda kwekukurumidza, kwakakurumidza kuwanda mumatambudziko eCOVID-19 ayo ave kuremedza zvivakwa zvehutano nehupfumi.
Gavhuna Ige vakazivisa izvi neChishanu pamusangano nevatori venhau, vachiona kuti, "Zvipatara zvedu zviri kusvika pachinzvimbo uye maICU edu ari kuzadza. Ino haisi nguva yakanaka yekuenda kuHawaii. ”
Gavhuna Ige vakawedzera, "Zvinotora vhiki nhanhatu kusvika kumanomwe kuti vaone shanduko yakakura muhuwandu hwezviitiko zveCOVID. Inguva ine njodzi yekufamba izvozvi. "Munhu wese, vagari nevashanyi zvakafanana, vanofanira kudzikisira mafambiro kuenda kuzvinhu zvakakosha zvebhizinesi chete."
Hawaii ichiri kuzadzwa nevashanyi. Zvitoro zvakaita seAla Moana Shopping Center, Waikiki, uye mahotera mazhinji azere. Ndege dzinotengeswa kunze, asi izvi zvinogona kunge zvichipera munguva pfupi iri kutevera.
Tourism ndiyo indasitiri hombe yekutengesa mu Aloha Hurumende. Zvibvumirano zvitsva kuvashanyi vanosvika zvinogona kuremadza iyi indasitiri uye hupfumi hwese muHurumende yeHawaii.
Iine anosvika mazana 1000 emakesi matsva eCOVID-19, zvipatara zvizere, kushanya hakuchina kugadzikana panguva ino mu Aloha Hurumende. Zviremera muHawaii nedzimwe nyika dzeUnited States zvainge zvaisa hupfumi pamusoro pehutano, uye kukanganisa uku kuri kuratidza - uye kunotyisa. Hawaii sedunhu rechitsuwa ine matambudziko akatokura.
John De Fries, mutungamiri, uye CEO we Hawaii Tourism Chiremera akacherekedza kuti kunyangwe vashanyi vasvika zvachose vatotanga kudonha, sezvazviri zvakaitika mukudonha, vashanyi vanofanirwa kufunga nezvekuregedza nzendo dzavo kuenda kuHawaii.
"Nharaunda yedu, vagari, uye indasitiri yevaenzi vane basa rekushanda pamwechete kugadzirisa dambudziko iri," akadaro De Fries. "Nekudaro, tiri kukurudzira zvikuru vashanyi kuti ino haisi nguva yakakodzera yekufamba, uye vanofanirwa kumbomisa nzendo dzavo mukupera kwaGumiguru."
Dr. Elizabeth Char, director weDhipatimendi rehutano, akasimbisa kukurumidza kwemamiriro azvino. "Kuwedzera kwenyaya dzeCOVID kunonyanya kukonzerwa nekupararira kwenharaunda, zvichiteverwa nevagari vanobhururuka kuenda kunzvimbo dzinotyisa kunze kwenyika nekuunza COVID kudzoka mudzimba uye munharaunda," akadaro Char. "Kana zvinhu zvikasachinja, masisitimu edu ekurapa anenge akaremara uye avo vanoda kurapwa kwemarudzi ese ezvirwere, kukuvara, nemamiriro ezvinhu, kusanganisira vashanyi vedu, vanogona kuzviwana kwakaoma kuwana kurapwa kwavanoda ipapo ipapo."
IHawaii-yakavakirwa World Tourism Network yakakurudzira Hawaii Tourism Authority uye Gavhuna weHawaii Ige kuti aite. Ichi chikumbiro hachina kufuratirwa uye chakapindurwa nekurambidza ichi chinyorwa kubvunza mibvunzo pazviitiko zvevatori venhau.
eTurboNews akafanotaura zvimwe zvirambidzo zviri kuuya, uye iri ndiro danho rekutanga nhasi.
Panguva ino, kune zvirambidzo zvekufamba zviripo kune ese makuru maHawaiian Islands, kusanganisira zviwi zveOahu, Kauai, Maui, Hawaii (the Big Island), Molokai, uye Lanai.
Izvi zvinosanganisira zvinodzivirira kufamba kwePacific zvinotarisirwa kune vese vafambi vasina kubayiwa nhomba mukati meUnited States.
Panguva ino, nekuda kwekuwedzera kwezviitiko zvemuno zvinokonzerwa nemusiyano weDelta, zvinogona kufanofungidzirwa kuti zvirambidzo zvekufamba zvinogona kumiswazve, kusanganisira bvunzo dzePCR kune wese munhu anosvika Aloha Nyika kuti udzivise izvo zvinotenderwa kwemazuva gumi ekuisa wega.
Muedzo parizvino unosungirwa kune vasina-kubaiwa vafambi chete.
Musi waAugust 10 zvinotevera zvinotevera kurambidzwa mukati meHurumende zvakarairwa naGavhuna Ige.
Misangano yemagariro ichaganhurirwa kune vasingapfuure vanhu gumi mumba uye kwete vanopfuura makumi maviri nemashanu panze.
Vatengi mumaresitorendi mabhawa nenzvimbo dzemagariro vanofanirwa kugara vakagara pamwe nemapati anochengetedza anosvika matanhatu ft kurekana pakati pemapoka (aine huwandu hukuru hwemapoka ane gumi mukati uye 6 kunze); hakuzovi nekusangana, uye masiki anofanirwa kupfekwa nguva dzese kunze kwekunge uchidya kana kunwa.
Iwo matunhu anozoongorora zvirevo zvezviitiko zvese zvinotsigirwa nehunyanzvi zvevanhu vanopfuura makumi mashanu, kuona kuti nzira dzakachengeteka dzakachengetedzeka. Varongi vezviitiko zvehunyanzvi izvi vanofanirwa kuzivisa uye kubvunza kune anotevera matunhu ejeri chiitiko chisati chaitika. County kubvumidzwa kunodiwa kune zvehunyanzvi zviitiko zvevanhu vanopfuura makumi mashanu.
Juergen Steinmetz, sachigaro we World Tourism Network akadaro achipindura chiziviso ichi: Ndiri kufara kuona HTA ichipedzisira kutaura. Zviripachena, iyi zvakare imba yedu, uye zvinoitika pano zvinoita kuti zvive zvevanhu. Isu zvakare tinopa iyo Hawaii Tourism Authority rutsigiro rwedu rwekushanda pamwe neyedu yepasirese network uye nyanzvi nevatungamiriri munyika zana nemakumi masere nesere kuti tironge nekufambisa kuburikidza nedambudziko rakaipisisa iri.
Jane Kubata anoti:
Nyamavhuvhu 28, 2021 pa13: 57
Ini ndiri mushanyi uyo aifanirwa kuve muMaui svondo rinouya. Tiri kudzima nekuda kwegavhuna nemameya zvikumbiro. Kurega kwaive kwakaoma nekuti kwaive kwegore redu rechimakumi mashanu, asi isu tinoedza kurudyi chinhu. Watinopa dzimba anoramba kushanda nesu mune zvakadaro (tiri kurasikirwa ne $ 50 kuti tiite zvakanaka). Mamwe ese maindasitiri anoenderana nemakambani emakambani ari mubhizimusi rekudzima kuchengetedza pamwe nemari dzese dzizere dzinosanganisira nendege. Tinonzwa kushandiswa!
Nyamavhuvhu 28, 2021 pa06: 49
Zvizere unobvumirana newe Sharon! Kuenderera mberi kwehunyengeri kubva kuruboshwe!
Nyamavhuvhu 26, 2021 pa16: 56
Zvichakadaro, Joe Biden anoenderera mberi nekuzarura musuwo wedu wemuganhu wakashama kuCovid Positive Illegals, uyezve vonyunyuta nezve Delta Variant. Hunyengeri. Dai ainyatsoita hanya nezvekupararira kweCovid, anga achivhara muganho wedu kubva kuMexico.
Nyamavhuvhu 24, 2021 pa01: 53
VT yakavhara nyika yayo kune vasiri vagari, nei isina HI?